Hanqina anniisaa elektirikii biyyoota guddataa jiranii
Akka gabaasni konfiraansii daldalaafi misooma mootummoota gamtoomanii /'UNCTAD'/ ALA bara 2017 ibsutti addunyaarraa biyya keenya dabalatee biyyootni 47 sadarkaa guddinaa gadaanaarratti argamu.
Haaluma kanaan biyyootni 33 ardii Afrikaatti, biyyootni sagal ardii Eeshiyaatti yommuu ta’an biyyootni shan ammoo Paasfikiifi Kaariibiyaa keessatti argamu. Biyyoota kunneenitti hanqinni annisaa elektiri sadarkaa yaaddessaa keessa jira.
Dhimma kana ilaalchise dhiyeenya kana mariin Finfineetti taasifamee ture. Mariin taasifame kunis gabaasa dhaabbatichi baaserratti xiyyeeffata. Obbo Jihoovaanii Vaalensiis, offiisara dhimmoota dinagdee dhaabbatichaati. Akka isaan jedhanitti, biyyoota guddinaan sadarkaa gadaanaarra jiranitti ummatni miliyoona 577 anniisaa elektirikiitti fayyadamaa hinjiran.
Akka waliigalaatti biyyoota addunyaa uwwisa humna elektirikii hinarganne keessaa dhibbantaan 54 biyyoota guddinaan sadarkaa gadaanaarra jiranitti argamu. Biyyoota kunneenitti harki walakkaan meeshaalee anniisaa elektirikii maddisiisuuf oolan alarraa galchuuf waan dirqamaniif baasii kanaaf oolu argachuufis daran danqamu.
Madda anniisaa garaagaraattis fayyadamuuf fedhiifi kutannoon qaban gadaanaadha. Kanaafuu yeroo baay’ee madda anniisaa gosa tokko qofa fayyadamuuf mul’ata bal’aa qabatanii socho’aa jiru.
Sababa kanaan hojiin investimentii dhibbantaan 42 hanqina humna ibsaan hojii ala ta’a. Kun ammoo duula hiyyummaafi hoji dhabdummaa hir’isuuf taasifamu akka hinmilkoofneef dhiibbaa guddaa uumaa jira. Biyyoota kunneenitti uwwisa humna ibsaa waliigalaa /'universal electric access'/ dhugoomsuuf baasii doolaara Ameerikaa biliyoona 12 hanga 40 barbaachisa.
Akkuma olitti ibsame biyyi keenyas biyyoota rakkoo kanaan xaxaman keessatti ramadamti. Biyyi keenya hanqina anniisaa elektiriikii hamaa keessaa bahuuf carraaqqii jabaa taasisaa jirti.
Haaluma kanaan yeroo dhiyoo as lageenshee dukkanashee akka ibsaniif sochii taasisaa jirtuun milkaa’aa jirti. Baay’eensaanii wayita anniisaa maddisiisuu eegalan, hanqina anniisaa biyyattii bal’inaan fura jedhamee kan eegamu ijaarsi hidhaa guddichi haaromsaa gara xumraatti jira.
Daarektarri Sagantaa, Inistituutii Qorannoo Misooma Itoophiyaa Doktar Gabrahiwoot Agabbaa akka dubbatanitti, uwwisni humna elektirikii Itoophiyaa baadiyyaatti dhibbantaa 10 yommuu ta’u, magaalaatti ammoo dhibbantaa 15 ta’uun sochii investimentiirratti dhiibbaa mataasaa uumaa jira.
Maddi anniisaa kunis dhibbantaan 96 bishaan /'hydroelectirici, dhibbantaan sadii qilleensa/bubbeera yommuu ta’u, dhibbantaa tokkoo gad hurka lafa keessaarraayi.
Akka ibsasaaniitti, uwwisni humna ibsaa gadaanaa ta’us akka biyyoota biroo faalama qilleensaaf kan hammeessu miti. Anniisaa qulqulluu qilleensa faaluurraa bilisa ta’eedha malee. Haaluma kanaan investeroota madda anniisaa qilleensa faalurraa bilisa ta’erratti bobba’an ni jajjabeessiti.
Keessumaa, investeroota alaa ce’umsa tekinooloojiin biyyattii deggersan karra saaqxee gammachuun simatti. Ta’us investeroonni alaa damee kanarratti bobba’uu barbaadan baay’eensaanii fedhii mataa ofii malee kan biyyattiif dantaa akka hinqabnee ta’uun bira ga’amee kanneen karri itti cufames akka jiranis hubachuun barbaachisaadha. Kanneen osoo fedhii dhiyeessaa biyya keenyaa hinfuramiin biyya alaatti erguuf carraaqanis ni jiru.
Daarektarichi akkana haa jedhan malee gabaasichi garuu biyyattiin maddawwan anniisaa gara garaa gabbisuun hanqina humna ibsaa hamaa keessaa akka baatu qeeqeera. Walumaagalatti, hanqina anniisaa elektirikii biyyoota guddinaan sadarkaa gadaanaarra jiranii furuun dhimma xiyyeeffannoo olaanaa barbaaduudha.
Torban kana/This_Week 43546
Guyyaa mara/All_Days 1468326